Dukhaanka oo si aad ah ugu faafaya guryaha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dukhaanka oo si aad ah ugu faafaya guryaha
La daabacay fredag 11 september 2015 kl 09.42
Dukhaanka ayaa ku soo badanaya guryaha, sid aad iyo aad ah ayuu ugu fidayaa guryaha Iswiidhan, cayayaankani inta badan waxa samayn balaadhan ku leh gadiidka dadweynaha sida basaska iyo tareenada oo iyagu wax ka qabasho u baahan.
Sannadkii hore oo kaliya ayaa waxay shirkadaha nadaafadu nadiifiyeen tiro aqalo ahoo ku dhow 25,000 kuwass oo dukhaan ku faafay sida ay sheegtay shirkada nadaafada ee Nomor korodh kan ayaa waxa uu bilaabmay sannadkii 2010 kii. Dukhaanka ayaa waxa uu aad ugu badan yahay guryaha sida kuwa ardayda ama lawada dago iyo guryaha dabaqyada ah. Inkastoo mushkiladu u muuqadato mid ku fidaysa degaanada cusub.
Håkan Kjellberg ah khabiir shirkada nadiifinta ee Anticimex ayaa waxa uu leeyahay uskaga ama wasakhdu maaha waxa kaliya ee soo jiita ama keena dukhaanka. Wuxuuna leeyahay dukhaanku waa cayayaan doortay in uu la noolaado dadka, waxa u galahaa una kala guurguuraa sariiraha, kuraasida ama fahidhiga guryaha la dhigto , sida qololka guriga iyo shandaha safarka iyo kuwa yaryarba, taasna waxay ku tusaysaa in aan cayayaankani waxba ku lahayn wasakhda lakiin uu rabo meel bilaaadam ka dhawyahay.